बिकास निर्माण Archives - Terai Nepal
‘हामीलाई छाडेर कहाँ गयौ मेराे बाबु? मेरो प्यारो राजा बेटा! इन्जिनियर बनेर बिहे गर्छु भन्थ्यौ। सबलाई सुख दिन्छु भन्थ्यौ। तर बीचमै छाडेर गयौ। अब हामीले कसरी बाँच्ने दुलरुवा छोरा!’ छोरा सतीशको अन्त्येष्टि गरेर फर्केकी......
असार २७ सप्तरी । प्रथम बार्षिक उत्सवको उत्सवको उपलक्ष्यमा श्री डिहबारबाबा सामुदायिक युवा क्लब बिसनपुरले आफ्नो गाउको डिहबारबाबा थानमा वृश्र रोपन कार्यक्रम सम्पन गरेको छ । सचिब अमित चौधरीको अनुसार थानमा पुजा गरि थानको......
विराटनगर । निर्माणमा चरम लापरवाही गरिएका कारण विराटनगर–१० पिपलचौकमा रोकेर राखेकै ठाँउमा टिपर भासिएको छ । सडकमा रोकेर राखेको को १ क ३१७२ नम्बरको टिपर सोमबार साँझ सडकमा भासिएको हो । विराटनगर महानगरपालिकासँग आशिष......
कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण २ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दलित गरीब आवास योजना प्रभावित भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुरूआत गरेको योजना चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘संघीय सरकारबाट चालू आर्थिक वर्षमा......